Barcelona oo jebisay rikoor 27 sano u yaalay hoyraalka Spain - iftineducation.com
iftineducation.com – Kooxda Barcelona ayaa jibisay rikooor 27 jir ah horyaalka dalka Spain kadib marki dhinaceeda dhulka la dhigi waayey 35 kulan oo xiriir ah dhamaan ciyaaraha ay sanadkaan dheeshay.
Guushi ugu danbeysay waxay si qurux badan uga gaartay kooxda Rayo Vallecano oo iyada oo ku ciyaareysay 9 laacib ay garka u gelisay 5-1.
Lionel Messi ayaa dhaliyey saddexleey ama saddex gool, iyadoo kooxda martida oo ahaa ee Vallecano ay isku dhexyaacday marki uu goolka koowaad ku bilaabay Ivan Rakitic.
Diego Llorente ayaa kaarka casaanka loo taagay oo dibadda loo saaray inti u dhaxeysay laba gool oo uu Messi dhaliyey iyo gool uu usoo magay kooxda Vallecano laacibkooda Manucho.
Manuel Iturra ayaa hadana kaarka guduudan loo taagay taasna waxay keentay in kooxda Barca ay ciyaarta sideey doonto isaga maamulato. Muddo yar kadib waxaa rigoore loo dhigay iska cunay Luis Suarez balse Messi ayaa taageerayaasha ugu laab qaboojiyey goolkiisii saddexaad ee ciyaarta daqiiqadii 35-aad.
Bandhiga goolasha Barcelona waxaa soo khatimay laacibka qadka dhexe ee dalka Turkiga Arda Turan oo saxiixay goolkiisii koowaad tan iyo marki uu ku biiray kooxda Barcca xagaagi lasoo dhaafay kadib marki uu kasoo wareegay naadiga Atletico Madrid.
Kooxda uu maamulo Luis Enrique hada waxay sideed dhibcood oo nadiif ah ku hogaaminayaan horyaalka Spain, iyaga oo ka horreeyo kooxda kusoo xigo ee Atletico.
Messi wuxuu iska bareejeyey Ronaldo oo 35 jeer dhaliyey goolasha sadexleeyda ah ama 3 gool hal ciyaar gudaheed. Messi goolashiisii xalay waxay ka dhigantahay inuu 35 jeer ka dhaliyey horyaalka Spain saddexleey.